‘नेताको पछि लागेर बिद्यार्थी भइदैँन’–नविना लामा – YesKathmandu.com
‘नेताको पछि लागेर बिद्यार्थी भइदैँन’–नविना लामा
सोमबार ०६, पुष २०७२
एमाले निकट बिद्यार्थी संगठन अनेरास्ववीयुको २२ औ राष्ट्रिय महाधिबेशन आउदो माघ २७ गतदेखि काठमाडौमा हुँदैछ । महाधिबेशनमा नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्न अखिल नेताबीच गुटबन्दी सुरु भइसकेको छ । त्यही गुटबन्दीकाबीचमा महासचिव नविना लामा अध्यक्ष पदको उम्मेद्धार हुन् । उनै लामासँग गरिएको कुराकानी ।
अखिलको महाधिवेशन लागेको हो त ?
– हो हाम्रो यहि माघ २७ गतेदेखि अखिलको महाविधेशनको मिति तोकेका छौ । महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दछ । त्यसैले नया नेतृत्वका लागि चुनावी महोल लागेको छ ।
उसो भए तपाई पनि अखिलको नयाँ नेतृत्वमा आउनु थाल्नु भएको हो ?
–अखिलको नया नेतृत्वका लागि म नै पहिलो नम्बरको दावेदार हु । अखिल भित्र राष्ट्रिय परिषद् सदस्य हुदै महासचिव उपाध्यक्ष भइसकेको एउटा महिला अव अखिलको नेतृत्वमा पुग्नु पर्दछ भन्ने हो र सवैको चाहना पनि त्यही छ । त्यसैले म अखिलको अगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिनेछु ।
किन नेतृत्वमा आउन चाहेको त ?
पहिलो कुरा त अखिल भित्रको गुटवन्दीलाई अन्त्य गरेर एउटा राम्रो विद्यार्थीको संगठन बनाउन । दोसो हाम्रो शिक्षा प्रणाली अहिले जुन छ । त्यो त्यति व्यवहारिक छैन र त्यसलाई प्रतिस्पर्धी गुणस्तरिय शिक्षा बनाउनका लागि । तेस्रो सच्चा र इमान्दार कार्यकर्ता निर्माण गरेर अभिभावक बन्ने । चौथो स्ववियु निर्वाचन गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई नया ढंगले अगाढि बढाउने ।
नया नेतृत्वमा जानका लागि के छन एजेण्डा ?
कमजोर बनेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सहि दिशा दिनका लाागि मेरो पहिलो प्राथमिकता पर्ने छ । भने अखिल विद्यार्थीको एक मात्र संगठन हो भनेर स्थापित गर्नेका लागि यहा भित्र रहेका गुटबन्दी,अराजक आर्थिक अनियमिता अन्त्य गर्ने मेरो मुख्य एजेण्डा रहेका छन् । त्यो मेरो नेतृत्वबाट नै सम्भव भएकोले मेरो ध्यान त्यसमा रहने छ । अर्को चाहि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको शैक्षिक माफिया व्यापरिकरणको अन्त्य गरि सरकारी स्कुलललाई राम्रो र शैक्षिक क्यालेण्डलरलाई वैज्ञानिक बनाउने । त्यस्तै गुटबन्दी रहित अखिल बनाउने पनि योजना छ
तपाई नेतृत्वमा आइसकेपछि शैक्षिक माफियाको अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ त ?
नाफा कमाउने र व्यापारका नाममा शिक्षा गर्ने माफियाको अन्त्य गर्ने मेरो योजना छ । अहिले केही व्यक्तिको हातमा मात्र शिक्षा छ । त्यो निजिकरणलाई पनि प्रतिस्पधी बनाउन आवश्यक रहेको छ । अहिले जुन दरमा निजीको प्रवेश छ त्यो भोलिको शिक्षामा डरलाग्दो बन्ने छ । तसर्थ त्यसलाई निर्मूल पार्न आवश्यक रहेको छ ।
कस्तो डरलाग्दो शिक्षा छ त ?
अहिले शिक्षा नाफामखी र कमाउने मात्र ध्यान दिने गरेका छन । त्यो शिक्षाले कति जनशक्ति दक्ष बनाए भन्ने हो । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विद्यार्थीलाई शोषण गर्ने खालको शिक्षा मात्र छ । शिक्षा भनेको मानिसको जिवनसंग जोडिएको हुन्छ । तर अहिलेका शैक्षिक माफियाहरुले त्यस्तो शिक्षा दिन सकेका छैनन ।
शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने योजना के छ ?
शैक्षिकमा जुन खालको नाफा र व्यापारीमूलक छ त्यसको अन्त्य मेरो योजना हो । शिक्षा सुधार्नका लागि निजिकरणलाई मुक्त बनाउने छु । सरकारी तहका स्कुल,कलेज तथा क्याम्पसलाई गुणस्तर बनाउने । सवै विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेण्डर अनिवार्य बनाएर समयमा परीक्षा संचालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने । त्यस्तै शिक्षा भन्दा टाढा रहेका समुदायलाई स्कुल ल्याउने जस्ता कार्यक्रम गर्ने ।
महाधिवेशन आउन थाल्यो तयारी के छ त ?
तयारी हामीले आआफ्नो ढंगबाट गरिरहेका छौ । जहासम्म नया नेतृत्वको कुरा छ । एक त हाम्रो संगठन लोकतान्त्रिकमा गएको छ । पहिलो कुरा त नया नेतृत्वका लागि सायद सहमति हुन्छ जस्तो लागेको छ । त्यो नभए निर्वाचनबाट नै नया नेतृत्व आउछ ।
कस्को नाममा सहमति हुन्छ त ?
अहिले म लगायत उपाध्यक्षद्धय दिपक गौतम र ऐन महर नयाँ नेतृत्वको लागि अध्यक्षको उम्मेववार छौ । त्यसमा पनि अहिले हामी मुख्य दुइ जना छौ । दिपक गौतम र म । ऐनजी र म एउटै गुटमा छौ । थोमसजी पनि हो । तर उहाँ बाहिर जानु भएकाले अर्को गुटबाट दिपकजी नै हो । जहासम्म उहाँ दुई जना भन्दा मेरो नाममा सहमति हुन्छ । मेरो क्रियाशिल क्षमताको हिसावमा मेरो नाममा सहमति हुन्छ । तर पार्टी भित्रको गुटबन्दीको कारणले सहमति नहुन सक्छ । म जतिको एउटा जनजाति महिला संगठनले पाउन सक्दैन । तर गुटबन्दी चुनौति छ ।
तपाई र ऐन कसले टिकट पाउछ त ?
ठ्याक्कै यो हो भन्ने अझै भइसकेको छैन । उहाँ र ममा जो भएपनि हुन छ । तर मैले नै टिकट पाउने हो । म उहाँ भन्दा सिनियर । नेतृत्वको हिसावले पनि महासचिव उपाध्यक्ष भइसकेको एउटा महिला भएको हुनाले पनि म पाउने भन्ने हो । हामी दुईवटा मिलिहाल्छौ ।
ऐन टिकट पाए के गनुहुन्छ नि ?
मैले समूहलाई विश्वास गरेर जानुपर्दछ । ऐन भर्खरै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहा पहिलो पटक उपाध्यक्ष हो । म जतिको कमिटीको च्यानल पार गरेर उहा आउनु भएको छैन । म अखिलको रापसहुदै अहिले महासचिव भएको छु । त्यसकारणले उहाँले मेरो अखिल भित्रको समपर्ण भएको छ । त्यसैले मैले नै टिकट पाउछु ।
अखिलको दोस्रो महिला अध्यक्ष बन्नु थाल्नु भएको हो ?
हो म अखिलको दोस्रो अध्यक्ष बन्न थालेको हो । म अध्यक्ष बन्ने ९९ प्रतिशत सम्भावना छ । गुटबन्दी केही गनेर भने । विद्यार्थीको हक हितका सवालमा विद्यार्थी आन्दोलनको एजेण्डा मसंग छ । र म नै ९९.५ प्रतिशत अखिलको अध्यक्ष हुन सम्भावना छ ।
तपाईको जित्ने आधार के छ ?
म एउटा इमान्दार कार्यकर्ता हँुदै नेता हुन पुगेको छु । न्यायको निम्ति विद्यार्थी संगठन चलाउन सक्छु । संगठनको भावना स्पीडलाई बोक्ने सक्ने क्षमता ममा छ । शैक्षिक आन्दोलनलाई नयाँ दिशामा लाग्न सक्छु । ७ बर्ष देखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गराउन पहल गर्न सक्छु । सवै महिलाहरुलाइै सम्बोधन गर्न सक्दछु । साथै कमिटी संगठनलाई संस्थागत ढंगबाट मिलाएर लैजान म सक्दछु । र अहिले देखिएको संगठन भित्रको गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने क्षमता मेरो भएकोले मेरो पक्षमा धेरै साथीभाईको सहानुभूति भएकोले म आफै चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु ।
अहिले अध्यक्षमा आकाक्षी तिन जान हुनुहुन्छ नविना के फरक छ अरुभन्दा त ?
म उहाहरु भन्दा सिनियर उहाभन्दा आन्दोलनमा पनि अग्रीम मोर्चामा काम गरेको अखिलको पुरानो मान्छे हुँ । म फिजिकल पनि महिला भएपनि जेलनेल खाएको छु । स्ववियु निर्वाचनमा पटक पटक वाहिय शक्तिसंग लडेर अखिललाई अगाडि बढाएको छु । उहाँहरुले म जस्तो कष्ट खाएको छैनन । आन्तरिक लडाईमा विशिष्टता हासिल गरेको छ र महिलाहरुका हकहितमा लागेर काम गर्न सक्दछु । तुलनात्मक ढंगले मैले अहिलेसम्म संगठनको जिवनमा गलत काम गरेको छ्रैन । संगठनभित्र कारवाहीको भागिदार पनि पनि बनको छैन । ममा आर्थिक र सांगठनिक इमान्दारिता छ, मैले संगठनको हित विपरित काम गरेको छैन । तर उहाँहरुमा त्यो छैन ।
तपाई नेतृत्वमा आएपछि अखिललाई कस्तो बनाउने त ?
अखिललाई विधि र प्रक्रियालाई संस्थाथत ढंगले अगाढि बढाउछु । गुटबन्दी अन्त्य गर्दछु । न्याय र सम्मानलाई अगाडि बढाउछु । संगठन भित्र महिला जनजाति मधेशी जुन न्याय नपाएर भौतारिएका छन । मैले एक गतिशिल विद्यार्थीको संगठन अखिललाई बनाउने छु । जुन अरुको भन्दा फरक । जुन संगठनलाई बदनाम छ त्यो म आइसकेपछि अन्त्य हुने छ । सहि इमान्दार न्यायप्रेमी विद्यार्थी संगठनको बनाउने छु ।
विकृत अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ त ?
अखिल भित्र प्रशस्त्र विकृति छन् । तिनीहरुको अन्त्य हुन आवश्यक छ । विकृती अन्त्य गर्नका लागि एउटा संस्थागत गर्नुपर्दछ । संस्थागत निति विधान र नियमलाई बाधेर नै विकृत अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यही निति र विधानलाई टेकेर अखिल भित्रकाो विकृत अन्त्य गर्न मेरो पहल हुने छ । गुटबन्दीका नाममा बाडफाड हँुदैन । निति र नियमललाई प्राथमिकतामा राख्दछु । त्यहीलाइै विधि विधानलाई कार्यन्यवन गर्ने छु । एविसिडी जो भएपनि । म विधिलाई टेकेर काम गर्ने छु । त्यसो हुन सकेको खण्डमा विकृत स्वत अन्त्य भइहाल्छ । अखिलमा दुईवटा गुट छ त्यो गुटलाई समायोजन गर्नुपर्दछ । विधिलाई अवलम्बन गरेर गुटबन्दी र विकृत अन्त्य गर्छु । विधीलाई कार्यन्वयन गर्ने अखिलको जिम्मा हो । मेरो पालामा कानुनको पालना नगर्ने विधानलाई मिचेर जानेलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुन्छ ।
उसो भए अहिले अखिल भित्र विधि र विधान अनुसार चलेको छैन ?
यहाँ त विधि र विधान कसैले मान्दैनन् । त्यस्तो लागु भएको पनि छैन । तर म अध्यक्ष भए भने विधान र विधिलाई कडाइका साथ लागु गर्दछु ।
त्यही भएर अखिल विग्रेको हो त ?
अखिल विग्रनु पनि त्यो पनि एउटा कारण हो ।
त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर र स्ववियु निवौचन गर्ने के छ तयारी ?
स्ववियु निर्वाचनका लागि हामी नेविसंघ अखिल क्रान्तिकारी सवै मिल्नु पर्दछ । एउटा संगठनमात्रले स्ववियु निर्वाचन गर्न सक्दैन । त्यसैले सवै संगठन मिलेर स्ववियुलाई कब्जा गर्नेमात्र नबनाई एउटा लोकतान्त्रिक विधि अपनाएर हारजितको स्वीकारेर जानुपर्दछ । स्ववियु निर्वाचन नगराएर यसलाई पारालाइसिस बनाउन पाइन्न । त्यसका लागि एउटा शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउने र त्यहीलाइ लागु गरेर ७ बषैदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गर्नुपर्दछ ।
साथै समयमा परीक्षा गर्ने नतिजा प्रकाशित गर्ने जस्ता शैक्षिक क्यालेण्डरमा बनाएर मात्र होइन लागु पनि गर्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयलाई कसरी लैजाने भन्न त्यही क्यालेण्डरले स्पष्ट पार्ने । विधि र प्रक्रियालाई मानेर जादा क्यालेण्ढर स्ववियु निर्वाचन गराउन सकिन्छ । आज विधि र प्रक्रियालाई नमानेर जादा त्रिवि अस्तवस्त छ ७ बषैदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । दलिय भागबन्डाले विश्वविदालय विग्रेका छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
शैक्षिक सुधार गर्ने के छ योजना ?
ठूलाठूला खालको शैक्षिक जागरण अभियान चलाउने । त्यो जागणरबाट शिक्षाको पहुच नपुगको समुदायलाई ल्याउने । शिक्षामा देखिएका विकृति विसंगतिलाई सुधार्ने । टायर र इटा बर्खासर मात्र शैक्षिक आन्दोलन हुदैन । विभिन्न विज्ञहरुसंग सल्लाह गरेर शिक्षाको अग्रगामी दिशमा लैजाने । नेपालको शिक्षा नितिलाई अझै प्रभावकारी बनाउने । र पढन नपाएका विद्यार्थीलाई ग्यारेन्टी गर्ने । यस्ता विषयमा प्रत्येक जिल्लाहरुमा जागरण अभियान गर्ने । शिक्षासंग सरोकार मन्त्रालयसंग बसेर अगाडि बढाउने । नेपालको शिक्षालाई गुणस्तर प्रतिस्पधी बनाउने जस्ता मेरा योजना छन् ।
रामकुमारी झाक्री हँुदा महिला अखिलमा कमिटी ३३ प्रतिशत बनाउनु भयो तपाई भएपछि महिलाको स्थिती कस्तो हुन्छ ?
म महासचिव हुँदा नै अहिले महिला अखिलको कमिटीमा ३५ प्रतिशत छ । त्यो मेरै कारणले भएको हो । राजनैतिक पार्टीमा लागेका हामी महिलालाई मूल धारमा लैजानका लागि ३३ प्रतिशतले नपुग्ने भइसक्यो । अव ५० प्रतिशत महिला अखिलको हरेक कमिटीमा सहभागि हुन्छन । अखिलले ५० प्रतिशत गरे भने अखिल महिलाहरुको पनि संगठन चिनिन्छ । राज्यले पनि महिलाई ५० प्रतिशत सहभागि गराउनु पर्दछ भन्नेमा दवाव पर्दछ । कार्यकारी पद अखिल भित्र होस वा स्ववियु पनि अध्यक्ष सचिवमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मेरो पहल हुने छ ।
महिलाहरुको राजनैतिकमा सहभागि छैनन नि त ?
हो अहिले छैनन । उनीहरुलाई राजनैतिकमा ल्याउनका लागि गाउ कलेज स्कुलमा जागरण अभियान चलाउन आवश्यक छ । महिलाहरुलाई राजनैतिक के हो भनेर सिकाउन प¥यो । उनीहरुलाई स्कुलिङग प्रशिक्षण गर्नुप¥यो । अनि उनीहरुलाई मूल राजनैतिकमा ल्याउन सकिन्छ ।
विद्यार्थी नेताहरु पार्टीका नेतामुखि भएका छन । विद्यार्थीका समस्या काबारे त्यति चासो राख्दैनन किन होला ?
अहिले विद्यार्थी नेताहरुमा गलत ट्रेन बसेको छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । यसको लागि संगठनभित्र विशुद्ध अभियान संचालन गर्नुपर्दछ । जो नेतृत्वमा छन तिनीहरु विद्यार्थीका लागि कति काम गरे त्यो हर्नुपर्दछ । खाली नेताको पछि लागेर विद्यार्थी नेता भइदैन । संगठन भित्र गलत काममा प्रोत्साहन नभई कारवाही गर्नुपर्दछ । त्यसैले त्यस्ता गलत ट्रेनमा लागेका मान्छेलाई संगठनमा प्रवेशै गर्नदिन हुदैन ।
अहिले नाकाबन्दीले विद्यार्थीलाई कस्तो असर पारिरहेको छ ?
अहिले एउटा छिमेकी मुलुकले आफ्नो संविधान बनाउदा अर्को मूलुक रिसाउनुपर्ने पर्ने कारण नै छैन । एउटा खुशी व्यक्त गर्न नसक्ने छिमेकी कहिल्यै असल हुन सक्दैन । कानुनी ढंगमा छिमेकीको गलत कुरा हो भनेर अखिलले ठूलो राष्ट्रिय कार्यक्रम नै ग¥यो । अहिले विद्यार्थीलाई निकै नै समस्या पारेको छ । यसमा हाम्रो संगठनले विशेष ध्यान दिएको छ । केही साथीहरुलाई हामीले सक्दो सहयोग गरिरहेका छौ ।
प्रस्तुतीः शरद शर्मा
मधेसी मोर्चाद्धारा रौतहटका तीन प्रहरी चौकीमा आक्रमण
मधेसमा सरकार कडा हुने संकेत
One thought on “‘नेताको पछि लागेर बिद्यार्थी भइदैँन’–नविना लामा”
राज्यले आँखा खोले पाँच बर्षमा कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउँछु
‘अखिलमा इतिहास भजाएर खाने परम्परा सकियो’
युद्ध जितेको सेनापतिले के गर्ने त ? :पुण्य ढकाल
मधेश आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर छैन
‘ठोकुवा गरेर भन्छु–माघ ८ मा संविधान बन्दैन’
दर्शक श्रोताको नजर र गीतको क्वालिटी हेरेर अवार्ड घोषणा गर्छौं-किरण अधिकारी
चीनको मुल सिद्धान्त बाह्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप होइन
केटाहरुलाई हानेको रङको लोला प्रहरीलाई लागेपछि मज्जा आयो
दरबार बनाउन किन पर्यो र ? कंगालहरुको घरबारका लागि लडिरहन्छु
चार ठाँउमा भाडिएको जनताको मर्ज होला त सेञ्चुरीसँग ?
नयाँ शक्ति छोडेका रामचन्द्र झा र रामकुमार शर्मा माओवादी केन्द्रमै फर्किए
वर्षाअघि पाइप बिच्छ्याउने र कालोपत्र गर्ने काम सकिन्छ – आयोजना
प्राचीन विश्वविद्यालय नालन्दा बाट नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनलाई हटाइयो
‘आमालाई पोइल पठाएर जारी लिन तयार हुने सांसदले मात्रै प्रचण्डलाई साथ दिन्छन’